hardisk ကိုမြှင့်ချင်လို့ — MYSTERY ZILLION
January 2014 in Hardware
ကျွန်မ စက်က memory က 1GB,Harddisk က 50 GB အဲဒါ program ရေးတောအရမ်းနှေးနေလို့ အသစ်လေးလည်းထပ်မဝယ်နိုင်လို့:p
စက်ကလေးကိုဝယ်တုန်းက winter root ဆိုင် second hand လေးပေါ့ computer ကိုင်ချင်လွန်းလို ပိုက်ဆံပြည့်အောင်မစောင့်နိုင်ပဲဝယ်ထားတာ....
အခုတောတကယ်လည်းသုံးရော အဆင်မပြေဖစ်နေပြီ..နည်းနည်းလေးတင်တာနဲ့ တင်လိုမရဖစ်နေလို့ ...အသစ်ဝယ်ဖို့ကမချိန်နည်းနည်းလိုသေးလို သစ်မရခင် ဝါးလေကြမ်းခင်းထားချင်လို....harddisk ကိုမြှင့်ရမလားmemory တိုးရမလားသိချင် ...အကူညီလေးပေးကြ၇င်သိပ်ကျေဇူးတင်မိမှာအမှန်ပင်....အော် cpu က
core2Dual 1.7 GHZ ထင်တယ် စက်ကအိမ်မှာကျန်ခဲ့လို့..ဟီး
50 GB ဆိုတာ အတော်လေးကို နည်းပါတယ်။ 50 GB လား 500 GB လား သေချာ ပြန်စစ်ကြည့်ပါအုံး ? 50 GB harddisk တွေ စျေးကွက်မှာ မရှိလောက်တော့ဘူး။
Core2Dual 1.7 GHz က အခု ခေတ် Core i5 လောက်တော့ မမြန်ဘူး။ CPU လဲမယ်ဆိုရင် mother board ပါလဲရတော့တယ်။ memory လည်း mother board နဲ့ သင့်တော်တဲ့ memory ပြန်လဲကောင်းလဲရလိမ့်မယ်။
ဒါကြောင့် memory ကို 1 GB ကနေ 4GB သို့မဟုတ် 8 GB ထိ မြှင့်တာက အကောင်းဆုံးပဲ။ memory ဘယ်လောက်မြှင့်လို့ ရမလဲဆိုတာက mother board နဲ့ သက်ဆိုင်တယ်။ mother board မှာ maximum memory capacity က ဘယ်လောက်လဲ ဆိုတာကို mother board model နဲ့ ပြန်ရှာကြည့်ပါ။
အင်းဒါဆို အကုန်လဲရတော့မှာပေါ harddisk က မျက်လုံးမမှားပါဘူး လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်နှစ်က ICT show ပွဲမှာဝယ်
ခဲ့တာဘယ်လိုလုပ်ရ....ဟင်း ^:)^ တစ်ပတ်ရစ်ဆိုတော.....
You should check your hard disk capacity in disk management (diskmgmt.msc) whether some of your hard disk space were unallocated or not.
I think you loaded visual studio and sql server (according to your previous questions).
You can free up memory usage and hard disk space by deselecting unused features of visual studio and sql server (eg. V# for visual studio (if you don't use)).
how i do free up memory usage and hard disk space by deselecting unused features of visual studio and sql server . :o3 pls giude me...
If you need free space for your HDD, when installation of VS Check only one language u need to write eg. Visual c# and uncheck other languages. For SQL Server, use express edition instant of Enterprise edition. It will increase your HDD free space
thk ,for your are answer... :-h